Ha na-eji Apple Watch iji megharịa drone na mmegharị ahụ [Video] | Esi m mac
Ha na-eji Apple Watch iji megharịa drone na mmegharị ahụ [Video]
Dochọrọ ijikwa drone jiri ike naanị site n'igharị aka gị? Ugbu a ị nwere ike, mana enwere obere nuance na ihe a niile, nke ahụ bụkwa na ị ga-enwerịrị Apple Watch.
Ndị nyocha Taiwan PVD +, emepụtala algọridim nke na-enye Apple Apple ohere ka ọ bụrụ njikwa igwe maka drones na ọbụna jikwaa ọkụs na-eji mmegharị aka. E mepụtara algorithm a kpọrọ 'Dong nzuzo' mgbe emechara 18 ọnwa nke nyocha, ọrụ a siri ike ma gụchaa, anyị ga-ahapụrụ gị ihe akaebe na video.
con 'Dong nzuzo' na Apple Watch gị, ị ga-enwe ike ijikwa drones iji mmegharị aka. Ihe Apple Watch na-atụgharịgharị aka na aka gị wee zipụ akara ngosi kwekọrọ na drones, algorithm abụghị naanị nke Apple Watch ka enwere ike itinye ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. N'akụkụ drones, a pụkwara iji algorithm na-achịkwa bọọlụ dị ka BB-8 droid ibu agha, Okirikiri 2.0 na ọkụ na-eji ejiji ha. Dịka e gosipụtara na vidiyo na mmegharị ahụ ị nwere ike ịgbanye ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ, algorithm nwekwara ike iji gbanwee agba ha.
Ebe ọ bụ na teknụzụ ka nọ na mmalite mmalite nke mmepe, ọ na-emetụta ya n'ụzọ dị nfe dịka viento. Agbanyeghị, ka oge na-aga, a ga-edozi nsogbu ndị a, yana mmụba na ndụ batrị , nke dị ugbu a n'ihe dị ka Nkeji 20.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ha na-eji Apple Watch iji megharịa drone na mmegharị ahụ [Video]
Nsogbu Royal: Zoro Ezo Adventures (Full), n'efu maka obere oge